Kooxdii Jwxo-shiil, oo Xurguftii u Dhaxaysay ay Cirka Isku Shareertay, Ayna Suurto Gal Tahay in Ina-dhuubo uu Kaga Dhawaaqo Eritrea Koox Cusub. – Rasaasa News
Jun 4, 2010 Ayna Suurto Gal Tahay in Ina-dhuubo uu Kaga Dhawaaqo Eritrea Koox Cusub., Kooxdii Jwxo-shiil, oo Xurguftii u Dhaxaysay ay Cirka Isku Shareertay
Waxaa muddo toban maalmood ka hor ah uu sheegay RW Itobiya in uu heshiis hoose u socdo garab ka mid ah garabyada ONLF oo muhiim ah, ayna suurto gal tahay in dhaskhso heshiis loo kala saxiixdo.
RW ah Itobiya ma uusan sheegin garabka ONLF ee ay heshiinayaan. Waxaa maalintii shalay arintaas sheegay in ayna xagooda shaqo ku lahayn Ina-dhuubo oo waraysi ay la yeelatay VOA.
Hadaba, sidaanu ku helay warar hose oo xog ogaal ah, waxaa mudo hal todobaad iy badh ah ay kooxda Jwxo-shiil isku haysatay in laga jawaabo hadalka RW Itobiya iyo inkale. Maadaama ay socdaan wadahadalo ay ku jiraan odayaal beeleed ayuu Jwxo-shiil ka gaabsaday in uu ka Jawaabo arintaasi, waliba isaga oo bixiyey waraysiyo dhawra.
Hadaba sida ay wararku sheegayaan xukuumada Eritrea ayaa jeclaysatay in laga jawaabo oo la beeniyo hadalka RW Itobiya. Jwxo-shiil, oo aan isagu jeclaysan in uu arintaas ka hadlo kalana tashaday odayaasha ergada u wada ee beeshiisa ayaa jeclaystay in Abtidoon uu ka jawaabo hadalka RW Itobiya.
Abtidoon, oo eegga aad u fahmsan amuuraha Jwxo-shiil uu ku jiro, ayaa diiday oo yidhi adiga ayaa u dhigma RW Itobiya ee waa in aad hadashaa.
Jwxo-shiil waxaa uu go,aan ku gaadhay in uusan hadlin, nasiib daro Ina-dhuubo, oo sida aan ognahay lagu badalay Jwxo-shiil, cudhaadhna ay u haysato xukuumada Eritrea ayaa waxaa ay saraakiisha Eritrea ku khasbeen in uu la xidhiidho ideecada Codka Maraykanka VOA.
Waxaana uu yidhi wixii ay xukuumada Eritrea u sheegtay oo uusan diidi karin. Waxaana si xoog leh la isula dhexmarayaa in ay haatan socoto qorshe ay wado xukuumada Eritrea oo ah in Ina-dhuubo uu Caasmara kaga dhawaaqo xil ka qaadid Jwxo-shiil, oo uu halkaas isugu yeedho cida uu isleeyahay garab ayey kuu noqon karaan.
Arinka ay haatan Eritrea wado ayaa ka hordhacay qorshe ay wadeen Ina-dhuubo, Qaaxo iyo maadeey, oo aha maadaama uu Jwxo-shiil soo jeediyey in Jabhadi ma jirtee Itobiya lala heshiiyo, ayey u sheegeen in uu xilaka iska dhigo shir la filayo in ay isugu tagaan dalka Qadar xiliga Jiilaalka.
Hadii ay dhab noqoto qorshahan ay Eritrea wado oo ah ka hortag in kooxda Jwxo-shiil ay isla qaato in Itobiya lala heshiiyo, ayaa waxaa uu keeni doonaa in mar labaad ay soo baxdo koox sadexaad oo aan ahayn labadii awal hore jirtay.
Sidaasina ay UWSLF ku noqoto ururka ugu muhiimsan ee isagu Itobiya la saxiixi doona heshiiska la rabo in qalinka lagu duugo Jilaalkan dalka Jabuuti.